Ellicott dia manambara ny teknolojia fandidiana vaovao - Blog Ellicott Dredges
ELLICOTT®INTERNATIONAL ANNOUNCES VAOVAO TEKNOLOHEVITRA TSY MISY INDRINDRA HO ANAO FAMPIASANA
Aogositra 1, 2001
HO AN'NY hatak'andro
Ny dredge fanamboarana tena misy indrindra. Ny fivoahan'ny 8 mm (203 mm) vaovao vaovao, fantsom-panala mandeha amin'ny herinaratra (SLD) ho an'ny fanamboarana taova ary fikojakojana rano miaraka amin'ny alàlan'ny fiaramanidina miloko telo (3), tsy mampiasa tariby.
Ellicott® Iraisampirenena, mpamokatra dredge iray lehibe amin'ny fanerena ny tontolo iainana, manambara karazana dredge vaovao izay mandeha irery. Mivezivezy amin'ny fiara mihetsiketsika telo na kalesy mivezivezy ny dredge ahafahana mijanona ao amin'ny toerana misy azy amin'ny fotoana rehetra satria misy sakeloka roa foana mifono ao ambany. Miaraka amin'ny hala-bato izy raha mbola mitsingevana eny amboniny. Io toerana napetraka io dia mamela ny mpanapaka handroso mankany amin'ny fihenan-dahatsoratra manaraka raha tsy resy lahatra. Io teknôlôjia io ihany no ahafahan'ny dredge miverina mandroso fitaovana maka zavatra voaloto izay mety ho efa tsy hita fa mbola mijanona eo amin'ny toerana mitovy ihany hanohizan'ny fandihizana mandroso.
Ny famoahana tohatra milomano mihazakazaka Ellicott® vaovao miaraka amin'ny kalesy mandeha an-tongotra 3 tsy mampiasa tariby.
Ny dredge vaovao dia mampindrana ny tenany amin'ny toerana fandehanana sy ny toerana misy azy indrindra indrindra amin'ireo renirano izay misy fofona. Raha misy ny dredge mody mety atahorana ho very andraikitra noho ny fantsom-bolany, dia tsy izy ity. Tsy misy koa ny tariby hampiasa ny dredge ary tsy misy tariby hampiasana vovo-javona voapoizina mahatonga korontana tsy mendrika. Na ny vodin-vodin-kofehy aza dia misy endri-batana mety ahafahana miraikitra mafy ao ambany.
Ny Ellicott® marika dredge dia miaraka amin'ny valizy fanamoriana anaty rano manokana izay misoroka ny fametahana tsipika ary mamela ny habetsahan'ny fitaovana voaloto halefa tsy tapaka, na inona na inona ny sediment ambany. Amin'ny tranga maro, indrindra amin'ny tontolon'ny ony, ny loto dia tsy eo amin'ny antsanga ihany fa koa amin'ny alàlan'ny fifindra-monina any ambanin'ny fasika na tanimanga. Ny mpanapaka ny dredge dia manana hery ampy hanalana ireo loto ireo amin'ny sosona manify. Ny singa dia afaka manala ny antsanga amin'ny halalin'ny 22 metatra ambanin'ny rano.
Ny unit dia manana fifehezana izay milaza ny mpandraharaha ny dredge izay mampiditra ny mpanendaka. Ny mpanao fanapahana dia afaka mihemotra amin'ny fandeferana amin'ny fatra iray na minina iray santimetatra (25 mm) izay manakiana, indrindra ho an'ireo fanodinkodinana voaloto. Ny mpandraharaha dia mifehy hatrany ny fampiatoana ny tsotsotra miverina ao anaty tsanganana anaty rano raha kely indrindra. Ny asan'ny dredge rehetra dia mifamatotra amin'ny rafitra manerantany.
Ity dredge tohatra mihetsiketsika momba ny tontolo iainana ity no fanatsarana lehibe voalohany ampiasaina amin'ity karazana teknolojia ity nandritra ny taona maro. Ireo Ellicott ireo® Ny seranam-piaramanidina Brand Swinging Ladder dia azo ampiasaina amin'ny farihy sy lakandrana tery toy ny lakandrano an'arivony kilaometatra any Florida, izay mila dredging. Ellicott® Ny sehatra iraisampirenena dia manana unit iray ankehitriny miasa ao amin'ny toerana afovoany andrefan'i Etazonia.
Ny asan'ny tohatra - ny fikororohana sy ny fampiakarana / ny fidinana - dia fehezin'ny ondrilahy hidraulika. Satria ny ram izay mampiakatra sy mampidina ny tohatra dia afaka mampiditra hery midina amin'ilay mpanapaka, dia miantoka ny fifandraisan'ny mpikapa amin'ny antsanga voaloto amin'ny fotoana rehetra ary tsy mitobaka izay mety hiteraka korontana tsy takatry ny saina.
Ny dredge dia azo ampiasaina amin'ny alàlan'ny fikorianan'ny 1,500 mankany amin'ny galononitra / minitra 6,000 (5,700 ka hatramin'ny 22,700 litatra / minitra). Izy io dia mifanentana amin'ireo rafi-pitsaboana sediment voaloto noho ny tombatombana marina amin'ny slurry ao amin'ny rafitry ny fantsom-pifanarahana tsy miovaova.
Mivezivezy be ny dredge ka afaka mamily ankavanana sy ankavia, mihemotra, ary na dia zaridaina mitovy aza toa ny misy fiara ny fiara. Ny dredge dia mety ho an'ny herinaratra na herinaratra mandeha amin'ny herinaratra.
Raha mila fanazavana fanampiny dia mifandraisa amin'ireto:
Paul Quinn, talen'ny varotra